भोली ९ बजे एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाए ओली र प्रचण्डले, मिल्ला त कुरो ? - Everest Dainik - News from Nepal
भोली ९ बजे एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाए ओली र प्रचण्डले, मिल्ला त कुरो ?
काठमाडौं, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रम तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचको छलफलमा वैचारिक र सांगठनिक विषयमा सहमति जुटाउन एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस बहसः २०४८ सालमा ‘बहुदलीय जनवाद’का बारेमा के भनेका थिए त मदन भण्डारीले ?
याे पनि पढ्नुस बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादबारे छिनोफानो एकता महाधिवेशनमा, तयार भयो ४२ पेजको राजनीतिक प्रतिवेदन
ट्याग्स: Party Unity